Baaritaan Lagu Bilaabay Dilkii Xalay Loo Gestay Gudoomiyehii Degmada Hodan Ee Magaalada Muqdisho – Great Banaadir
MUQDISHO (WBW: The GBM) – Guddoomiyihii Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo xalay saqdii dhexe u geeriyooday rasaas ay ku fureen ciidamo katirsan Boliiska Soomaaliya, ayaa lagu soo waramayaa in dilkiisa loo xiray qaar kamid ah ciidamadii rasaasta ku furay gaarigiisa.
Sidoo kale, Laamaha Amniga ayaa soo xiray Taliyeyaasha Saldhigyada Ciidanka Booliiska ee Degmooyinka Howl Wadaag iyo Waabari ee Magaalada Muqdisho, waxaana la bilaabay in la wareysto taliyeyaasha labada saldhig.
Guddoomiye Cabdixakiin Dhagajuun ayaa marayay Agagaarka Degmada Howl Wadaag ee Magaalada Muqdisho markii ay ciidamo katirsan Boliiska Soomaaliya ay rasaasta huwiyeen gaarigiisa.
Shalay ay aheyd markii uu kusoo noqday Magaalada Muqdisho, wuxuuna kasoo noqday Dalka Turkiya oo isaga looga daweynayay dhaawacyo ka soo gaaray qarax isaga haleelay sanadkii hore.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa Wararka Aduunka, gaar ahaan Wararka Shanta Soomaali (Jamhuuriyadda Soomaaliya, Jamhuuriyadda Jabuuti, Jamhuuriyadda Somaliland, Soomaali Galbeed, iyo NFD); siiba Wararka Gobolkii Banaadir (Shabeellaha Hoose, Muqdisho iyo Shabeellaha Dhexe).